Vaovao - mpiorina oxygen oxygen PSA dia mitana andraikitra lehibe amin'ny indostria
Generator oksizenina PSAmampiasa sieve molekiola zeolite ho toy ny adsorbent, ary mampiasa ny fitsipiky ny adsorption pression sy ny desorption decompression mankany amin'ny adsorb ary mamoaka oksizenina amin'ny rivotra, amin'izay dia manasaraka ny oxygen amin'ny fitaovana mandeha ho azy. Ny fisarahan'ny siôve molekiola z2olite O2 sy N2 dia mifototra amin'ny fahasamihafana kely amin'ny savaivony mahery amin'ireo gas roa ireo. Ny molekiola N2 dia manana tahan'ny fanaparitahana haingana kokoa amin'ny mikrôpôra ny sivana molekiolan'ny zeolite, ary ny molekiola O2 kosa dia manana taham-pielezana miadana kokoa. Miaraka amin'ny fanafainganana mitohy ny fizotran'ny indostrialy, mitaky ny fangatahan'ny tsenaMpamokatra oksizenina PSA mitohy mitombo, ary ny fitaovana mitana andraikitra lehibe amin'ny indostria.
Hangzhou OuRui Air Separation Equipment Co., Ltd. dia matihanina mpanamboatra ny fisarahana rivotra cryogenika, Fitaovana famokarana oksizena VPSA, fitaovana fanadiovan-drivotra voafintina, famokarana azotazy PSA, fitaovana famokarana oksizena, fitaovana fanadiovana azota, famokarana azota manasaraka manify ary fitaovana famokarana oksizenina, herinaratra. Valizy fanaraha-maso pneumatika. Valizy fanaraha-maso ny mari-pana. Tapaho ny orinasa mpamokatra valizy.
1. Momba ny fampiharana ny mpitrandraka oksizenina eo amin'ny sehatry ny fandoroana miharena oxygen
Ny atin'ny ôksizenina amin'ny rivotra dia ≤21%. Ny fandoroana solika ao anaty vata indostrialy sy lafaoro indostrialy dia miasa ihany koa noho io atin'ny rivotra io. Nasehon'ny fampiharana fa rehefa mihoatra ny 25% ny habetsahan'ny oksizenina entona ao anaty fandoroana vinaingitra dia 20% ny fitsitsiana angovo; ny fotoana fanamoriana boiler dia ahena amin'ny 1/2-2 / 3. Ny fampiroboroboana oksizenina dia fampiharana ny fomba ara-batana hanangonana ny oksizenina amin'ny rivotra, ka ny atin'ny fitomboan'ny oxygen ao anaty entona nangonina dia 25% -30%.
2. Momba ny fampiharana ny mpamorona oksizenina eo amin'ny sehatry ny fanaovana papermaking
Miaraka amin'ny fanavaozan'ny firenena ny fepetra takiana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny fizotran'ny fanaovana taratasy, dia mitombo ihany koa ny takiana amin'ny pulp fotsy (ao anatin'izany ny pulp hazo, pulp reed, ary pulp volotsangana). Ny tsipika famokarana pulpôlôma vita amin'ny klôro tany am-boalohany dia tokony hovaina tsikelikely ho tsipika famokarana pulpa tsy misy klôro; Ny tsipika famokarana pulp vaovao dia mitaky fombafomba fanadiovana tsy misy klôro, ary ny fanadiovana pulp dia tsy mila oksizena madio madio. Ny ôksizenina novokarin'ny mpanamboatra oxygen adsorption swing swing dia mahafeno ny fepetra takiana, izay ekonomika sy tia tontolo iainana.
3. Momba ny fampiharana ny mpamorona oksizenina eo amin'ny sehatry ny fandoroana tsy ferrous
Miaraka amin'ny fanitsiana ny firafitr'ireo indostrialy nasionaly, ny fandoroana tsy-ferrous dia nivoatra haingana tato anatin'ny taona vitsivitsy. Mpanamboatra maro no nanomboka nampiasa mpamokatra ôksizônina mihodina tsindry fanerena ao anaty fizotran'ny fantson'ny oksizenina ao anaty firaka, varahina, zinc ary antimony, ary amin'ireo fofona mampiasa fitrandrahana oksizenina ho an'ny volamena sy nikela. Ny fampiasanatsenan'ny mpamorona oksizenina PSA nitarina.
Ny kalitaon'ny sivana môlekiola ampiasaina ao Generator oksizenina PSAmitana toerana lehibe. Ny sivana molekiola no fototry ny adsorption swing swing. Ny fahombiazana avo lenta sy ny fiainam-panompoan'ny sivana molekiola dia misy fiatraikany mivantana amin'ny fahamarinan'ny vokatra sy ny fahadiovana.